Onwe Erecting Tower Crane
Nnukwu akụkụ ihe owuwu
Nhazi nke kreenu
Excavator akụkụ akụkụ
Ibu ibu akụkụ akụkụ
Eweli eriri kreenu
XJCM ika 6X6 ụgbọala na-ebu okporo ụzọ ebugharị na Turkmenistan
Post oge: Jan-27-2021
N'ime ọkara afọ gara aga, Site na mbọ nke ndị ọrụ XJCM niile, anyị emechaala ihe mkpuchi ụgbọ ala niile maka ọrụ ike na Turkmenistan. Nke a bụ imepụta ọhụụ ， ihe egwuregwu kreenu 6X6 Hongyan chassis .The kreenu ka ike. On Jan, 24,2021, Anyị na-enwe a sim ...GỤKWUO »
30 nkeji XJCM ika 25 ton truck crane akụkụ dị njikere
Post oge: Nov-16-2020
Ndị ahịa si mba ọzọ nyere iwu 30 nkeji 25 ton XJCM brand crane na Hong Yan chassis na Auguest, 2020. Ndị ọrụ XJCM na-arụsi ọrụ ike ma na-arụsi ọrụ ike maka iwu a .Ugbu a, akụkụ niile adịla njikere. Shoplọ ahịa Nnọkọ ga-anọ n'ọrụ. Hong Yan Chassis ọcha XJCM ụgbọala kreenu cab & nb ...GỤKWUO »
Mmadụ Bịa ka Bauma CHINA 2020, XJCM ụlọ ndò nọmba bụ E2.349
Post oge: Nov-05-2020
Bauma CHINA, ndị kasị ibu na-ewu ígwè ngosi na Asia, na-akpọ gị òkù izute CHINA si n'ichepụta ike ụwa! 24 -27 November 2020 XJCM ga - ezute gị na Shanghai New International Expo Center, ụlọ ntu Mba E2.349 GỤKWUO »
New ịnọgidesi ike ọhụrụ ohere ọhụrụ mmalite
Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co, Ltd. (XJCM) e hiwere na 2002. Ndebanye aha isi obodo bụ 46 Nde RMB. Dị ka onye mbụ na-emepụta ihe na onye ndu nke crane terrain, anyị na-arụpụta ma na-emepe emepe kreeno siri ike, kreen, nke na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri ...GỤKWUO »
Xuzhou ụgbọala na-emepụta kreenu na-ekwu maka nchoputa nke dobe jitter
A na-ejikarị ụgbọ okporo ígwè ụgbọ ala ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ iji gbanwee radius na-arụ ọrụ, achọrọ ka ọ buru njupụta na-agbanwe agbanwe, ọrụ ahụ na-agbanwe agbanwe ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya, ma na-enwekarị usoro ikuku hydraulic na-agbanwe agbanwe. Mgbe valvụ na-arụ ọrụ ...GỤKWUO »
Nchọpụta nsogbu nke ụlọ elu igwe eji eme ihe na nlezianya
Nsogbu agbapụ ụlọ elu ekwentị kreenu usoro nsogbu: otu bụ dochie ihe ọhụrụ; nke abụọ bụ ịrụzi na imezi. Tụkwasị na nke ahụ, e kwesịrị ịkọwa isi ihe ndị na-esonụ n'oge usoro disassembly na ndozi. 1. Tupu ihicha, buru ụzọ hichaa mpụga nke ...GỤKWUO »
Adreesị: NO.1 Dapeng Industrial Park, Tongshan District, Xuzhou, Jiangsu, China
Ekwentị: + 86-516-85055801
Ekwentị mkpanaka: 86-18852120810